Codsiga lagu maareeyo Samsung Gear S2, Gear S3 iyo Gear Fit oo hadda laga heli karo App Store | Wararka IPhone
Codsiga lagu maareeyo Samsung Gear S2, Gear S3 iyo Gear Fit ayaa hadda laga heli karaa App Store
Muddo hal sano ah ayey ku qaadatay shirkadda Kuuriya inay fuliso ballanqaadkeedii, ballanqaadkii ay sameysay markii ay suuqa ka soo saartay Samsung Gear S2, kaasoo ay ku sheegtay in dadka isticmaala iPhone ay sidoo kale ku raaxeysan karaan qalabkan cajiibka ah ee ay noo soo bandhigeyso taaj cusub. waa taaj meertada ah oo lagu dhex wareejinayo howlaha kala duwan ee uu terminalkani na siinayo. Inbadan oo idinka mid ah ayaa isweydiin kara maadaama ay macquul tahay in qalabkani uusan la jaan qaadi karin barnaamijka Android Wear waxaa laga heli karaa App Store.
Sababta ma aha mid kale oo aan ahayn nidaamka qalliinka in Samsung waxay ku isticmaaleysaa boosteejooyinkeeda, taas oo aan aheyn Android Wear, laakiin Tizen, Shirkada Kuuriya nidaamka ay ku shaqeysato, ee ah nidaamka howlgalka taas oo ay dheertahay bixinta batteriga aadka u adag, waxay Samsung siineysaa xorriyad aysan ku heysan Android Wear
Haddii aad sugeysay in qalabkani ay la jaan qaadayaan iPhone-ka, waqtiga ayaa ugu dambeyn yimid. Barnaamijka Samsung Gear S, waxay noo ogolaaneysaa inaan ku xirno Samsung Gear S2, Samsun Gear S3 iyo Samsung Gear Fit iyo Samsung Gear Fit 2 ilaa iPhone-keena.. Caqli ahaan isdhexgalka ayaa ku xadidan hal jiho marka laga reebo markaan muusikada garaacno, sidaa darteed ma awoodi doonno inaan ka jawaabno fariimaha ama wicitaanada, laakiin ogeysiisyada dhamaantood waxaa lagu soo bandhigi doonaa Samsung wearable.
Samsung ayaa had iyo jeer lagu dhaleeceeyay inay ku xadiday qalabkeeda nidaamkeeda deegaanka, wax waligiis aan waxtar lahayn, tan iyo inkasta oo soo saaraha iibiya aaladda ugu badan adduunka, haddana dhammaan dadka isticmaala ee xiiseynaya smartwatches-ka shirkadda ma laha Samsung. Nasiib wanaagse, shirkaddu waxay beddeshay istiraatiijiyadeeda, dabcan, si loo ballaariyo tirada aaladaha la jaan qaadaya sidaas darteedna iibintooda, maaddaama ay ku mahadsan tahay codsigan waxay ku dareysaa tiro badan oo macaamiisha Apple ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Codsiga lagu maareeyo Samsung Gear S2, Gear S3 iyo Gear Fit ayaa hadda laga heli karaa App Store
Wanaagsan !! Waad ku mahadsan tahay maqaalka!
Maxaa ku saabsan qalabka S!
Habka Sawirka ee iPhone 7 Plus waa halyeeyada ku dhawaaqista cusub ee Apple